Inona no atao hoe fitantarana tantara sy ny fomba hamelomana azy amin'ny alàlan'ny Infographics | Famoronana an-tserasera
Ny fitantarana dia misy teknika ampiasaina hitantarana tantara amin'ny fomba izay ahitan'ny mpihaino, mpamaky ary / na mpijery rehetra mahatsapa sy mahatakatra ny hafatry ny marika.
Fomba efa tranainy io, izay efa elaela no nampiasaina betsaka tamin'ny marika an-tserasera, satria ny mahasamihafa ny mitantara tantara sy ny fanatanterahana Storytelling dia ilay Ny fitantarana tantara dia ampiasaina hilazana marika iray, serivisy sy / na vokatra.
1 Ahoana ny fampiasana ny Storytelling amin'ny paikady marketing
2 Iza ilay Mpiresaka ary inona no ataony?
3 Tombontsoa amin'ny fitantarana tantara rehefa ampiasaina ho tetikady marketing
4 Manaova infographic hanoritana ny tantara
Ahoana ny fampiasana ny Storytelling amin'ny paikady marketing
Satria efa neken'ny besinimaro io teknika io dia namela hevitra vaovao hivoatra, ary anisan'izany nyara-pihetseham-po"Ary"Marketing momba ny tantara”. Ity farany dia nanondro ny hevitra milaza ireo tantara ireo izay mifamatotra amin'ny fomba sasany amin'ny marika iray.
Ary koa amin'ny alàlan'ny fiheverana ny "Marketing momba ny tantara», Nisy olona matihanina vaovao nipoitra ihany koa, fantatra amin'ny anarana hoe the mpilaza tantara.
Iza ilay Mpiresaka ary inona no ataony?
Ilay Mpiresaka dia ny tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny Storytelling ny marika, na ny manokana na ny orinasa, ny maha iray amin'ireo asany lehibe indrindra dia ny famotopotorana ny tantaram-piainan'ny tena na ny tantaran'ny orinasa voalaza, mampifandray ny zava-mitranga, ary manazava ny tantara ankoatry ny maha olombelona, ​​sns
Tombontsoa amin'ny fitantarana tantara rehefa ampiasaina ho tetikady marketing
Ao anatin'ny lehibe tombony azonao tratrarina amin'ny fampiasana Storytelling Amin'ny maha tetika marketing anao dia misy ireto:
Mora tadidy: Ny tantara rehetra dia misy fiandohana, eo afovoany sy farany. Ao amin'izy ireo dia aseho ny filaharan'ny fisehoan-javatra, noho izany, mora tadidy izy ireo, ankoatry ny fanamorana ny famaritana azy.
Manana fanaparitahana lehibe izy ireo: Satria mora tadidy izy ireo, matetika koa izy ireo mora ampitaina, izay mamela izany tantara izany hizara bebe kokoa, ary vokatr'izany dia misy ny "teny aloaky ny vava" mahasoa.
Manentana ny fahatokisan-tena izy ireo: Raha ny tantara "akaiky" indrindra an'ny marika no ilazana, azo atao ny mamantatra akaiky kokoa ny sasany amin'ireo lafin-javatra aseho azy ireo ny mpijery, ka miteraka toetrandro lavorary hitarika fahatokisana.
Manintona ny lafiny saro-pady izy ireo ary mamorona fifandraisana: Ny tantara tsara laza sy be fitaovana dia matetika miteraka fifandraisana amin'ireo mpijery, sady manambara ny lafiny ara-pihetseham-po amin'ny marika.
Manaova infographic hanoritana ny tantara
Raha te hamorona tantara tsy hay hadinoina ny marikao dia mila manontany tena vitsivitsy ianao amin'ny tenanao alohan'ny manomboka mamolavola na mamorona infographic:
Ahoana no nanombohany? Ny vahoaka dia maniry marika na orinasa mahomby hilaza ny nanombohany.
Inona ny nofinao Tsy maintsy milaza ianao hoe inona no votoatin'ny marikao, inona no tanjona rehefa nanomboka ny orinasa ianao, ary inona ilay nofy manosika anao.
Inona ny sakana efa vitanao? Na eo aza izany, na inona na inona lalana nisafidy anao, dia misy vato mahatafintohina antsika, na izany aza, ny zava-dehibe dia tsy ny isan'ny fotoana nahalavoanao, fa ny isan'ny fotoana niakaranao, satria zavatra tena mahomby tokoa izany. olona marobe.
Ahoana no nahatratraranao ireo tanjona? Raha vitanao ny mampita amin'ny infographic ny tantaran'ny nahatratraranao ny tanjonao dia hanome toky ny olona ianao ary ireo fihetsem-po ireo dia hampifandraisina amin'ny marikao.
Inona avy ireo tanjonao vaovao? Tena ilaina ny manasongadina ao amin'ny infographic izay tanjonao vaovao amin'ny maha marika na orinasa anao. Ny fanehoana ny fivoarana sy ny fivoarana miandalana dia fomba iray tsara entina manentana ny olona.
Tokony hamaly ireo fanontaniana ireo ianao mialoha manaova Storytelling amin'ny infografikao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Inona no atao hoe Storytelling ary ahoana ny fomba hamelomana azy amin'ny fiainana amin'ny Infografika